Anonymous – See More…
နှစ်ကြိမ် ကမ်းလှမ်း နှစ်ကြိမ် အငြင်းခံရလိုက်ရတဲ့ အဆင်နယ်ထက် သူ့ရဲ့ လက်မှတ်ဟာ အဲရစ် တန်ဟက် အတွက် သာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်တဲ့ အာဂျင်တီနား ကြယ်ပွင့်
July 1, 2022 Anonymous
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ အေဂျက်စ် မှ ပေါင် 43 သန်း နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ တောင်းဆို ထားတဲ့၊ အာဂျင်တီးနား ကြယ်ပွင့် ဟာ အဲရစ် တန်ဟက်ဂ် ရဲ့ ဆန္ဒ စာရင်း ထဲ မှာ ပါဝင် နေ ပေမယ့်
၇ ရက်သား/ သမီးများအတွက်၂၀၂၂ခု ဇူလိုင် လ တစ်လစာအထူးဟောစာတမ်း… တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်‬ ခရီးတိုး ခရီးရှည်များ သွားနေရလိမ့်မည်။ ထိုခရီးသည်များသည်လည်း သင့်အတွက် ကျိုးထူးစေပါလိမ့်မည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခုသင်ကြားရခြင်း သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်ပါသည်။ မရည်ရွယ်ဘဲ မြေဝင်တတ်သည်။ ဤလအတွင်း အစစအရာရာသတိကြီးစွာထား ရန် လိုပါသည်။ မိမိအပေါ်
(Unicode) တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်‬ ခရီးတိုး ခရီးရှည်များ သွားနေရလိမ့်မည်။ ထိုခရီးသည်များသည်လည်း သင့်အတွက် ကျိုးထူးစေပါလိမ့်မည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခုသင်ကြားရခြင်း သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်ပါသည်။ မရည်ရွယ်ဘဲ မြေဝင်တတ်သည်။ ဤလအတွင်း အစစအရာရာသတိကြီးစွာထား ရန် လိုပါသည်။ မိမိအပေါ် မကောင်းကြံခြင်း မကောင်းပြောခြင်းများ ခံရတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင်၌ ထိုခိုက်တတ်သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့အတွက် ဆရာဇင်ယော်နီဟောကြားထားသော ၇ ရက်သားသမီးများရဲ့ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် နှင့် ကံကောင်းခြင်းအတွက် အဆောင်ယတြာများ…
တနင်္ဂနွေသားသမီး – အိမ်နီးချင်း၊ လုပ်ငန်းပြိုင်၊ အပြိုင်အဆိုင်တို့ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါသည်။ ရန်များသောနေ့ ဖြစ်ပါသည်။ ကံကောင်းစေ မည့် ဂဏန်းမှာ ၆၁ ဖြစ်ပါသည်။ ကံကောင်းရန် ဖိနပ်အဟောင်းကို စွန့်လိုက်ပါလေ။ တနင်္လာသားသမီး – မလုပ်ချင်သောအလုပ်၊ မယူချင်သောတာဝန်၊ မတွေ့ ချင်သောလူ စသည်များ ကြုံလာရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးကိစ္စများ
အရန် ဂိုးသမား တဦး အလိုရှိမယ် ဆိုရင် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နှင့် ပူးပေါင်းလိုကြောင်း ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ အာဂျင်တီးနား ကြယ်ပွင့်
Manchester United ဂိုးသမားဟောင်းကြီး ဆာဂျီယို ရိုမဲရိုး က အသင်းဟောင်း Manchester United အနေနဲ့ အရန် ဂိုးသမား တစ်ဦး လိုအပ်နေမယ် ဆိုရင် သူ့ကို ကမ်းလှမ်း နိုင်ကြောင်း ဆိုလိုက်ပြီး အသင်းဆီကို တကျော့ပြန် ပူးပေါင်းဖို့ အတွက် ဆန္ဒရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။
ဖရန်ကီ ဒီဂျောင်၊ မာလာစီယာ တို့အပြင် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ရောက်ရှိလာမည့် ကစားသမား ၅ ဦး
Manchester United အသင်းဟာ ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ Ajax အသင်းမှ ကွင်းလယ်လူ ဖရန်ကီ ဒီဂျောင်၊ ဖီယင်နု အသင်းမှ ဘယ် နောက်ခံလူ တိုင်ရယ် မာလာစီယာ တို့ကို ခေါ်ယူဖို့ အခြေခံအားဖြင့် သဘော တူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် . ၂၀၂၂ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း . ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် . (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း…
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် . ၂၀၂၂ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း . ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် . (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း SUN MON TUE WED THU FRI SAT
(Zawgyi) တနဂၤေႏြသားသမီးတစ္ပါတ္စာေဟာစာတမ္း တနဂၤေႏြ သား၊သမီးဇာတာရွင္တို့သည္ ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ ကံေကာင္းေသာကာလဟုဆိုနိုင္သည္။ မိတ္သစ္ေဆြသစ္ရျခင္း၊ အကူညီေကာင္းမ်ားရျခင္း၊ ေငြေၾကးကံေကာင္းျခင္းမ်ား ရွိသည္။ စက္ပစၥည္းအသစ္ဆန္းမ်ားဝင္ကိန္းရွိသည္။ ခရီးထြက္ရမည္။ အိုးအိမ္ေဆာက္ျခင္း၊အိမ္ေျပာင္းျခင္း ရွိမည္။ သမီးရည္းစားမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္ အဖုအထစ္အနည္းငယ္ရွိမည္။မိမိအမွားနည္းပါက ျပႆနာမႀကီးနိုင္ပါ။အိမ္ေထာင္ေရးနားလည္မႈအျပည့္ျဖင္ သာယာေျဖာင့္ျဖဴးေနမည္။အားနာတတ္ေသာအက်င့္ေၾကာင့္ အစစ အရာရာေနာက္ေႏွးတတ္သည္။မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းသတိျပဳရန္လိုအပ္သည္။အက်ိဳးေပးအေရာင္ အစိမ္းရင့္၊မီးခိုး။အကိ်ဳးေပးဂဏန္း ၃၊၅၊၆၊၉။လာဘ္ေနအရပ္ ေတာင္အရပ္။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ ေအာင္သေျပ
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်အတွက် ခုနစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက် တစ်နေ့တာဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ယတြာများ..
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်အတွက် ခုနစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက် တစ်နေ့တာဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ယတြာများ SUN MON TUE WED THU FRI SAT